Afrika Mainty · Septambra, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Mainty · Septambra, 2019
Tantara mikasika ny Afrika Mainty tamin'ny Septambra, 2019
Olona folo no maty tany Mozambika nandritra ny fihetsiketsehan'ny FRELIMO
Mozambika 26 Septambra 2019
Nitranga tao an-kianjan'ny 25 Jona izany rehetra izany, tao an-tanàndehiben'i Nampula, any avaratr'i Mozambika. Araka ny fantatra dia maro ireo mpikambana ao amin'ny antoko Frelimo no nanapa-kevitra ny hivoaka ny vavahady tokana nisy tamin'io fotoana io rehefa tapitra ny fihetsiketsehana nataon'i Nyusi.
Madagasikara 21 Septambra 2019
Tanzania 19 Septambra 2019
Kamerona 18 Septambra 2019
Kamerona 17 Septambra 2019
Mandranitra Fifanenjanana ara-poko sy fivavahana ny volavolam-pisarahana ao amin'ny Fiangonana Ethiopiana Orthodoksa
Etiopia 15 Septambra 2019
Milaza ny Oromo mpitondra fivavahana fa antenain'ny EOTC ny Oromo mpandeha any am-piangonana hivavaka amin'ny fiteny Ge’ez, fiteny litorjikan'ny fiangonana, na Amharika, fitenim-piasana ao amin'ny governemanta federalin'i Ethiopia.
Nanao fangatahana tany amin'ny Firenena Mikambana sy ny Vondrona Afrikanina ireo mpiaro ny zon'olombelona noho ny fitazonana ilay Nizeriana mpitarika hetsi-panoherana
Nizeria 10 Septambra 2019
"Mazava fa noforonina fotsiny ho an'ny tanjona hampanginana an'i Sowore ny fiampangana asa fampihorohoroana tsy mari-pototra izay nanenjehana azy."
Manome voninahitra an'i Remmy Ongala, mariky ny sekoly mozika fahiny ny klioban'ny fiara tranainy voalohany sy tokana ao Tanzania
Tanzania 09 Septambra 2019
Nikarakara fampisehoana fiara mba hanomezam-boninahitra ilay kalazan'ny mozika Tanzaniana Remy Ongala ny Oldschool Rides Tanzania, fikambanana natokana ho an'ny fanavaozana sy fankalazana ireo fiara taloha ao Tanzania sy ao amn'ny faritra,
Ady mafy vao nahazo anjaran-tsehatra ao amin'ny ‘Fast and Furious 9′ ity mpanao haiady avy any Kamerona ity
Kamerona 05 Septambra 2019
Hipoitra ao amin'ny “Fast and Furious 9” ka hitoetra ho Afrikana faharoa hivoaka amin'ilay andian-tantara ity mpiadin'ny Ultimate Fighting Championship (UFC) sy ny Mixed Martial Arts (MMA) avy ao Kamerona ity.
Mozambika nanasonia ny fifanaraham-pandriampahalemana fahatelo ao anatin'ny fisarahan-kevitry ny mpanohitra sy ny tsy firaharahian'ny olona
Mozambika 05 Septambra 2019
Tamin'ny fotoana nanatontosana ny lanonana mamarana ny ady an-trano fahatelo, mbola tany am-piasana ny ankamaroan'ny mponin'i Maputo, na voafandrika tao anatin'ny fitohanam-pifamoivoizana tao an-drenivohitra